चिकित्सकको आयु बिरामीको भन्दा १० वर्ष कम ! – Health Post Nepal
चिकित्सकको आयु बिरामीको भन्दा १० वर्ष कम !
२०७६ साउन ७ गते ९:५३
धेरैले चिकित्सकलाई भगवान् मान्ने गर्छन्, भगवान् सम्झेर मनैदेखि पुज्ने गर्छन् । उनीहरू सोच्छन्, मानिसलाई बचाउन सक्ने सामथ्र्य राख्ने चिकित्सक कुनै भगवान्भन्दा कम हुँदैनन् ।
एउटा बिरामीको ज्यान बचाउन रात–दिन नभनी खटिने चिकित्सक स्वयंको आयु भने कति हुन्छ होला ? इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन (आइएमए) पुणे च्याप्टरले गरेको एक अध्ययनअनुसार भारतीय चिकित्सकको औसत आयु कुल जनसंख्याको औसत आयुभन्दा कम्तीमा १० वर्ष कम हुने गरेको छ, अर्थात् भारतीय चिकित्सकहरू औसत ५५ देखि ५९ वर्ष मात्र बाँच्ने गरेका छन् ।
यो अध्ययन आइएमएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको विश्लेषणमा आधारित थियो, जसमा महाराष्ट्रका ५ हजार ५ सय चिकित्सकका साथमा देशभरका १ हजार एक सय दर्ता भएका चिकित्सक सहभागी थिए ।
आइएमएकै अनुसन्धानकर्ताहरूले भारतकै केरल राज्यमा गरेको अर्को एक अध्ययनका क्रममा अधिकांश चिकित्सकको मृत्यु मुटुसम्बन्धी रोग तथा क्यान्सरका कारण हुने गरेको तथ्य फेलापारेका थिए ।
‘हामी चिकित्सकबारे यो नजिता देखेर आश्चर्यचकित थियौँ । किनभने, हामीलाई लाग्थ्यो, उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूका लागि के सही छ । त्यसैले, उनीहरूको उमेर पनि धेरै हुन्छ,’ डा. विनायक केपीले भने ।
अध्ययनका अनुसार एउटा भारतीयको औसत आयु ६७.९ वर्ष रहेकोमा मलियालीको औसत उमेर ७४ वर्ष छ । जबकि, मलियाली चिकित्सकको औसत आयु भने ६१.७५ वर्ष रहेको अध्ययनले जनाएको छ, जुन अन्य व्यक्तिको तुलनामा १० वर्ष कम हो ।
यद्यपि, चिकित्सकहरू लामो समय काममा खटिने र सामान्य व्यक्तिभन्दा धेरै तनावमा रहने भएका कारण पनि उनीहरूको आयु औसतभन्दा कम हुने गरेको डा. विनायकको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकहरूको पनि कामको समय निर्धारण हुनु जरुरी छ । सरकारी सेवा–सुविधाबारे बहस हुनु जरुरी छ । त्यसबाहेक चिकित्सकहरू पनि वेला–वेलामा गरिने अनिवार्य स्वास्थ्यपरीक्षणका लागि तयार हुनु आवश्यक छ ।’
एउटा सफल चिकित्सक बन्नु पनि अब चुनौतीको विषय बनेको उनको भनाइ छ । ‘चिकित्सकमा देखिने तनावका कारण उनीहरू मुटुरोग, मधुमेह, पक्षाघातजस्ता गम्भीर रोगको जोखिममा रहने गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले त हिप्पोक्रेटिक शपथमा चिकित्सकलाई आफ्नो स्वास्थ्यबारे ध्यान दिन पनि अपडेट गराइएको छ ।’
(यो अध्ययन डेटकियरमा प्रकाशित छ ।)